यसरी पकाउँदा पोषक तत्व नष्ट हुँदैन !! | सुदुरपश्चिम खबर
यसरी पकाउँदा पोषक तत्व नष्ट हुँदैन !!
खानाको सम्बन्ध भोक मेट्नुसँग मात्र छैन । हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्वको मूल स्रोत भनेको खाना नै हो । तर, स्वादको चक्करमा हामी यसरी खाना पकाउँछौं, जसले पोषक तत्व नष्ट हुन्छ ।
नेपाली भान्सामा समय र परिवेश अनुसार अनेकथरीका परिकार पाक्ने गर्छ । अनेक स्वादयुक्त यी खानाहरुमा विभिन्न किसिमका मसला र तेलको प्रयोग गरिन्छ ।
माथिका सबै विधिहरु सबैको लागि सम्भव नहुन सक्छ । तर जसरी पकाउँदा होस् खानेकुरामा रहेको पौष्टिक तत्व भने नष्ट हुन दिनु हुँदैन । (अनलाइनखबर बाट सभार)